ဘွဲ့လား လက်မှတ်တွေလား အတွေ့အကြုံလား | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Business & Economics » ဘွဲ့လား လက်မှတ်တွေလား အတွေ့အကြုံလား
Posted by manawphyulay on Jan 22, 2013 in Business & Economics |3comments
အလုပ်မရသေးသူကလည်း ဘွဲ့ရ ၊ သင်တန်းအောင်လက်မှတ် လေးနဲ့ဆို အလုပ်ကောင်းများ ရလေမလား ဆိုပြီ ဘွဲ့ရအောင် သင်တန်းအောင်လက်မှတ်ရအောင် ကျောင်းတက် သင်တန်းတက်ပေါ့။
အလုပ်ရပြီးတဲ့သူကလည်း နောက် သင်တန်းအောင်လက်မှတ် ထပ်ရရင် ဒီထက်ကောင်းတဲ့နေရာ အလုပ်လေးများ ရလေမလာဆိုပြီး သင်တန်းတွေထပ်တက်ပေါ့။
နေရာကောင်းတဲ့ အလုပ်လေးရတော့လည်း ဒီလို ဘွဲ့ရ သင်တန်းအောင်လက်မှတ်တွေကြောင့် ဒီနေရာမျိုး ရတာ နောက် ဘာသင်တန်းထက်တက်လို့ အောင်လက်မှတ်ရရင် ဘယ်လိုနေရာတော့ လျှောက်လို့ရမှာဘဲ အဲဒီတော့ သင်တန်းထပ်တက်ရင်ကောင်းမယ်တွေးကာ သင်တန်းတွေထပ်တက်ပေါ့။
ဒီလိုနဲ့ဘဲ ဒီလိုနဲ့ဘဲ ပေါ့ဗျာ……။
အစ်မ မနောရေ .. မင်္ဂလာပါရှင့် ….
အရည်ချင်းကိုပြတဲ့ certificate တွေကို ငွေပေးဝယ်လို့ အင်ထုရနေတဲ့ တိုင်းပြည်မှာ ကိုယ့်လုပ်ငန်းလည်ပတ်မှုအတွက် တာဝန်ပေးခံရမယ့် ၀န်ထမ်းရွေးချယ်တာ … ဒီလောက်တော့ စည်းတွေမျဉ်းတွေ တင်ထားမှ တော်ကာကြမှာ ။ အိုးပဲ့နဲ့ စလောင်းရွဲ့လိုပေါ့လေ … အဟိ … ။
ပြောမယ့်သာ ပြောတာ… ပါ့ဘလစ်လုပ်ပြီး အလုပ်ခေါ်တဲ့ အလုပ်က ရှားတယ် … ကြံရာမရလို့သာ … စည်းကမ်းချက်တွေ ထုတ်ပြီး ခေါ်ထားတာမျိုးဆိုတော့ …. လိုချင်တာတွေ … ဟိုရေး ဒီရေး … ပေါ့ .. လာလျှောက်သူကလည်း .. .. လက်မှတ်တွေသာ ကိုင်ထားတယ် .. တကယ်တတ်သလားဆိုတော့ ယောင်ဝါးဝါးတွေများတာကိုး … ။ လုပ်ငန်းခွင်မှာ တစိမ်းတစ်ယောက်ကို အလုပ်ခန့်ဖို့ ဆိုလျှင် ယုံကြည်စိတ်ချရဖို့တော့ …. စိစစ်မှုတွေ လုပ်ကြတာ ဖြစ်သင့်ဖြစ်ထိုက်တယ်လို့ မြင်မိပါတယ် ။
ကမ်ပဏီ အတော်များများက နီးစပ်ရာ ပတ်သတ်ရာ ပတ်သတ်ကြောင်းကို ခေါ်ပြီး ခန့်တာများတယ် … ။ အဲ့လို လူမျိုးဆို certificateက သိပ်အရေးမကြီးတော့ဘူး … ။ငတုံးပဲလာလာ .. ငအပဲလာလာ … မျက်စိကို စုံမှိတ်ပြီး ခန့်တာ .. ကိုယ်တွေ့ ပါတော် … ။
ကျွန်မအလုပ်ဝင်တုန်းက …. ကျောင်းပြီးထားပေမယ့်.. ဘွဲ့မယူရသေးဘူး … ခြောက်တီးခြောက်ချက်ဘာသင်တန်းညာသင်တန်း .. လက်မှတ်လေး .. လေးငါးခုနဲ့ .. တကယ်တတ်သလားဆိုတော့လည်း … မတတ်ဘူး(ကိုယ်ဥာဏ်မမှီလို့မတတ်ခဲ့တာပါ ..ဟီး) … ။ အဲ့တုန်းက .. မိတ္တူမကူးတတ် … double tape မသုံးတတ် .. ပြောရလျှင် ဘာဆိုဘာမှကို မလုပ်တတ်ဘူး .. ဒါပေမယ့် ..ဦးလေး မျက်နှာနဲ့ လုပ်ရခဲ့တယ် … ။ ဒါနဲ့ပဲ အောက်ခြေက တဆင့်ချင်းသင်ယူရင်း လေ့လာရင်း .. နေရာလေး တစ်နေရာရခဲ့ပါတယ် ။ ဘာအထောက်ထားမှ မလို … CV တောင်မတင်ပဲ…အလုပ်ရခဲ့တဲ့အပြင် ၊ ဒီအလုပ်ခွင်မှာပဲ7နှစ်နီးပါးကြာအောင် အလုပ်စွဲမိတာကြောင့် … ဖွတ်ကြားတစ်ယောက်အတွက်တော့ … ဘ၀မှာ မှတ်မှတ်ရရပါပဲ …. :harr:
အလုပ်ခေါ်တဲ့သူတွေမှာလဲ အတွေ့အကြုံအရ အရည်အချင်းတွေ ထပ်တိုးပြီး ကန့်သတ်လိုက်ရတာဖြစ်မှာပါ … အလုပ်ခန့်ပြီးမှ ဟိုဟာမတတ် ဒီဟာမတတ်နဲ့ သုံးစားလို့မရဖြစ်ခဲ့တဲ့ အတွေ့အကြုံတွေ ဘယ်လောက်များနေလဲမှမသိတာ ..
ကျွန်မ အရင်တုန်းက ကွန်ပျူတာစာစီဆိုင်လေးတစ်ဆိုင်ဖွင့်ဖူးတယ် … စာတွေကို ကိုယ်တိုင်ရိုက်ရာကနေ မနိုင်တော့လို့ စာရိုက်ဖို့ ၀န်ထမ်းခေါ်ရပါတယ်။ အစိုးရရုံးကြီးတစ်ရုံးနားမှာ ဖွင့်တာဆိုတော့ စာချုပ်တွေ ရုံးစာတွေ အများကြီးရိုက်ရတယ်။ လာလျှောက်တဲ့ကောင်မလေးက မြန်မာစာနဲ့ကျောင်းပြီးပြီး စာရိုက်တဲ့လက်ကွက်အရမ်းမြန်လို့ သူ့ကိုခန့်လိုက်တယ် ….
မြန်မာစာဘွဲ့ရတစ်ယောက်ကို ယုံမိလို့ တော်ရုံလွှတ်ထားလိုက်တာ … တကယ့်တကယ်ကျတော့ မြန်မာစာကို သတ်ပုံမှတ်အောင် ၀ါကျမှန်အောင် မရေးတတ်တဲ့ မြန်မာစာဘွဲ့ရနဲ့တိုးနေလို့ ဖြေရှင်းနေရာတာနဲ့ အမှားစစ်နေရတာနဲ့ တော်တော်စိတ်ညစ်ခဲ့ရပါကြောင်း ….